नेपालका ५ कमजोरी जुन कोभिड-१९ ले उजागर गरिदियो « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
नेपालका ५ कमजोरी जुन कोभिड-१९ ले उजागर गरिदियो
२०७७, २५ चैत्र बुधबार १४:२० मा प्रकाशित
जनस्वस्थ्य सरोकार । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालमा गत एक वर्षमा पौने तीन लाख सङ्क्रमित भए अनि झण्डै तीन हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। वर्षैभरि महामारीको त्रास कायमै रह्यो। लामो लकडाउनले स्वास्थ्यका साथै जनजीविकामाथि नै असर पर्‍यो।
चाहे प्राकृतिक होस् वा मानवसिर्जित हरकिसिमको सङ्कटसँग जुझ्ने प्रमुख हतियार भनेको पूर्वतयारीलाई मानिन्छ। महामारीको हकमा देशहरूको पूर्वतयारीको परीक्षण भयो। त्यसमा नेपाल कत्तिको खरो उत्रन सक्यो त?
‘प्रकोपको पूर्वतयारीको हकमा हामी जहिले पनि कमजोर रह्यौँ। जति काम भएका छन् ती स्वाभाविक थिए, हुनैपर्ने किसिमका थिए,’ जनस्वास्थ्यविद् डा शरदराज वन्त बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रालयमा प्रमुख विज्ञ तथा निमित्त सचिव एवं जनस्वास्थ्य जानकार डा. सुशील प्याकुरेल भन्नुहुन्छ-‘जब हामी महामारीको दोस्रो लहरको खतराको कुरा गर्छौँ हामीले सीमाक्षेत्रमा व्यवस्थित किसिमका होल्डिङ, सेन्टर चेकजाँच प्रणाली अनि क्वारन्टीन प्रणाली भएको पाउँदैनौँ’
‘तर हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्था हेर्दा भोगाइबाट सिक्ने प्रवृत्ति देखिँदैन। अर्थात् कमजोरीहरू दोहोरीरहन्छन्,’ जनस्वास्थ्यविद् वन्तले बताउनुभयो ।
“महामारीको बेला समन्वयको दह्रो संयन्त्र आवश्यक पर्ने रहेछ नत्र त उसले उसलाई पन्छाउने जस्ता काम हुनसक्दा रहेछन्। त्यसैले स्वास्थ्यको हकमा त्यस्तो दह्रो संयन्त्रको खाँचो टड्कारो देखा परेको एउटा पाठ सिक्न सकिन्छ,” विगतमा महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जिम्मेदारी समेत बहन गरिसकेका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
“अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३३ हजार सरकारी कर्मचारी छन् अनि ५६ हजारभन्दा धेरै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन्। यी सबैलाई तीनै तहमा समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्न सक्ने अनुभवी नेतृत्वपनि चाहिन्छ,”उहाँले भन्नुभयो ।
महामारीभन्दा पहिलेकै अवस्थादेखि नेपालका स्वास्थ्य संरचना तथा स्रोतको अवस्थामा प्रश्न उठ्दै आएका थिए। महामारीले ती संरचना कति कमजोर रहेछन् भन्ने देखाएको विज्ञहरू बताउँछन्। अन्य देशले जति धेरै सङ्क्रमण नबेहोर्दा पनि स्वास्थ्य संरचनाले निकै चुनौती बेहोरे।
न्यूनतम सुविधा सहितका शैय्या भएका अस्पतालहरूको अभाव खट्कियो भने सघन उपचार धेरैलाई आवश्यक परे के गर्ने भन्ने त्रासपनि उत्पन्न भए। हालै सरकारले तीन सयभन्दा धेरै स्थानीय तहमा एकैपटक अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेकोलाई विज्ञहरूले स्वागत गरेका छन्। तर भौतिक संरचनाका अतिरिक्त जनशक्ति तथा स्रोतको वितरण हुन नसके त्यसले फाइदा नदिने भन्दै उनीहरूले सचेत गराएका छन्। जनशक्तिमा पनि दक्ष चिकित्सकका अतिरिक्त दक्ष नर्स तथा अन्य दक्ष प्यारामेडिकको महत्त्व थप देखिएको उनीहरूले बताए।
संरचना र स्रोत भएपनि तिनको उचित व्यवस्थापन हुन नसके बेकामे हुनसक्छन् भन्ने उदाहरण अन्य देशको अनुभवबाट देख्न सकिने डा वन्तले बताउनुभयो ।
“हामीले धनी तथा शक्तिशाली देशले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेका उदाहरण पनि देख्यौँ। त्यसैले स्रोतमात्रै सबथोक होइन, व्यवस्थापन पनि जान्नुपर्छ भन्ने गतिलो सन्देश यो महामारीले दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
“हामीकहाँ नीतिगत निर्णय गर्नुपर्‍यो भने जहिले पनि अलमल र ढिलासुस्ती हुन्छ। निर्णय प्रक्रिया चुस्त छैन। अनि कार्यान्वयन अझ फितलो छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
“हाम्रो प्रणाली कतिपयको तुलनामा बेसी उत्तरदायी देखियो। ज्येष्ठ नागरिकले बेलैमा खोप पाए अनि धेरैको मृत्यु भएन। जनस्वास्थ्य प्रणाली सोचेजत्ति खराब रहेनछ भन्ने देखायो,” डा उप्रेती बताउनुहुन्छ
अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा भएका विस्तार तथा विकास, जनचेतनामा आएको अभिवृद्धिजस्ता विषय सकारात्मक पाटो भएको डा वन्तले औँल्याउनुभयो ।
यी सकारात्मक पक्षहरूमा टेकेर पूर्वतयारी अनि समन्वयमा ध्यान दिन सके आगामी दिनमा आउनसक्ने कोभिड महामारीको थप लहर वा अरू महामारीबाट पनि निकै हदसम्म जोगिन सकिने जानकारहरूले बताएका छन्। बीबीसी